Af soomaali (Somaliska) • Vuxenutbildningar
Way sahlan tahay in meesha saxda ah la helo– Dhamaan waxbarashada oo la geeyey hal meel oo qur ah.
Waxaan kugu caawinaynaa inaad hesho waxbarashada dadka waaweyn. Waxbarasho kugu hogaamin karta shaqo. Waan fududayneynaa inaad raadisid oo aad heshid xirfadii mustaqbalka.
Waxbarashadu waxay ku baxdaa afka iswiidhishka
Dhamaan waxbarshadu waxaa ay ku baxdaa luuqada iswiidhishka.Sidaas darteed waa muhiim in qofka waxbarashada dalbanayaa uu akhrin karo, ku hadli karo, uuna qori karo luuqada Iswiidhishka.
Halkaan waxaad ka heleysaa waxbarashadaan:
Dhismaha (Bygg & anläggning)
Korontada iyo Tammarta (El & energi)
Barashada fanka (Estetiska utbildningar)
Gaadiid, Bakhaar iyo rarid (Fordon, lager & transport)
Wax iibinta iyo ganacsiga (Försäljning & handel)
Dhulka, kaymaha iyo dabeecada (Jord, skog & natur)
Maqaaxiyaha iyo badeecada (Restaurang & livsmedel)
Nabadgeyada iyo difaaca (Säkerhet & försvar)
Farsamada iyo wershedaha(Teknik & industri)
Tacliinta iyo barbaarinta (Undervisning & pedagogik)
Caafimaadka iyo daryeelka (Vård & omsorg)
Qiimeyn aqooneed (Validering)
Haddii aadan haysan shahaado iyo wax kale oo cadeyn ah oo muujinaaya aqoonta aad leedahay?Waa la qiimeynayaa aqoontaada waxaadna heleysaa warqad cadeyn ah inaad aqoontaas leedahay iyo waxyaalihii aad kasoo shaqeysay. La xiriir lataliye dhinaca tacliinta - iyo shaqada ah ee degmada aad degan tahay si aad u heshid taageero iyo qiimeyn waxbarasho.
Xiriirka dhinaca internetka ee degmooyinka halkaan baad ka heli:
Xiriirka dhinaca internetka /Länkar/